I-Naram-Sin - UKumkani we-Akkad Dynasty
UKumkani we-Akkad Dynasty
U-Naram-Sin (2254-18) wayengumzukulu kaSargon, umsunguli we-Akkad Dynasty [bona u-Empire wokuqala ] owawuse-Akkad, isixeko esithile ngasenyakatho eBhabhiloni.
Ngoxa uSargon wayezibiza ngokuthi "uKumkani waseKishi," umkhokheli wemikhosi uNamam-Sin wayeyiNkosi "yezona ngxumbane" (kwindalo yonke) kunye "noothixo ophilayo." Le meko yayiyizinto ezintsha ezibhaliswe kwirejista echaza ukuba ubungqina babantu babesicelo, mhlawumbi ngenxa yechungechunge lokunqoba kwempi.
I-stele yokunqoba ngoku eLouvre ibonisa enkulu kunesiqhelo, i-helm-helmeted Naram-Sin.
I-Naram-Sin yandisa intsimi yaseAkkad, ulawulo oluphuculweyo ngokumisela i-accounting, kwaye yandisa ubukhulu bezenkolo zaseAkkad ngokufaka iintombi ezininzi njengabafundisi ababingeleli bezona zikolo ezibalulekileyo kwiidolophu zaseBhabhiloni.
Iinjongo zakhe zibonakala ziqhutyelwe entshonalanga ye-Iran kunye nenyakatho yeSiriya, apho kwakhiwa khona isikhumbuzo kwixesha lanamhlanje u-Tell Brak owenziwe ngezitena egxininiswe negama likaNamam-Sin. Intombi kaNamam-Sin uTaram-Agade ibonakala etshatile inkosi yaseSiriya ngenxa yezizathu zezopolitiko.
Umthombo: Imbali ye-Near East 3000-323 BC , nguMarc Van De Mieroop.
Yiya kwezinye iincwadi zakudala / zeNkcazo Imibhalo yeglosari eqala ngeleta
Ezinye iipellings : Narām-Sîn, Naram-Sin
Intaba iPinatubo Eruption ePhilippines
Vula okanye i-Elite?